Otu esi ewepụ ijiji n'èzí site na nkwụsị
chọpụta ebe ijiji bi na ozuzu - na otu ha si abanye n'ụlọ. Ozugbo a mara nke a, idebe ihe ọcha, mwepu, na njikwa igwe ma ọ bụ kemịkal ga-enyere aka gbochie ha. Nnyocha ụlọ iji chọpụta ebe ijiji bi na ozuzu, a ...GỤKWUO »
Mee ka Molọ ahụ pụọ n’ Houselọ Gị
Fọdụ ụmụ oke nwere ike ịme anụ ụlọ mara mma, nke na-atọ ọchị, mana oke ụlọ abụghị otu n'ime ha. Na mgbe mkpanaka na-abanye n'ụlọ gị site na mgbawa ma ọ bụ ọdịiche ma ọ bụ gnaws na drywall, igbe ndị echekwara, na akwụkwọ, ma ọ bụ ọbụna wiring iji mee akwụ ya - mgbe ịmị mamịrị na ịwụfu nsị ka ọ na-aga, i ...GỤKWUO »
Ebee ka m ga-etinye ọnyà bekee na azịza 11 na azịza ndị ọzọ
Kedu ka oke oke si aba n'ụlọ? Kedu ka isi mara ma ị nwere oke? Gini mere oke ji buru nsogbu? Rat nke Norway na oke ụlọ bụ oke abụọ na-ebukarị ụlọ ma ha nwere ike ibibi ihe. Ihe ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ajụjụ ndị a na-ahụkarị banyere pes a pes ...GỤKWUO »
Ihe dị iche n'etiti oke na oke
E wezụga eziokwu na oke na ụmụ oke dị iche, ha bụ obere esemokwu ndị ọzọ dị n'etiti ha. Ọ dị mkpa ịmara esemokwu ndị a n'ihi na mbọ ị na-agba ịnyịnya ibu ga-aga nke ọma mgbe ị ghọtara otu pests ndị a, omume ha, nri pr ...GỤKWUO »
7 Ihe ịrịba ama nkịtị na-egosi na ị ka nwere oke ma ọ bụ oke n'ime ụlọ gị
Nwere nsogbu ụmụ oke ma ọ bụ oke dị n'ụlọ gị, mana ị na-eche na gị - ma ọ bụ ọkachamara na-ahụ maka pesti ị kpọrọ - tufuo mkpanaka niile. Ma olee otu i si mara n'ezie? Ndi nsị ndị ahụ ị chọtara n’okpuru kaboodu bụ nke ochie ka ọ bụ nke ọhụrụ? Nke ahụ ị na-ata gị ụra ...GỤKWUO »
Nabata nleta nke Pelsis Group
Ndị njikwa ngwaahịa ọkachamara atọ nyere anyị ezigbo nkuzi maka mmelite ngwaahịa anyị. N'otu oge ahụ, ha na-eweta ụfọdụ ngwaahịa ọhụụ maka imepụta ebe a. Anyị ga-anwa ike anyị niile ịnye ngwaahịa ndị na-enye afọ ojuju n'ọdịnihu dị nso! GỤKWUO »
Ozi Anyị Echiche
Cangzhou Jinglong Technology Co.,. Enwere m ego nke 20 millio ...GỤKWUO »
CANGZHOU JINGLONG Nkà na ụzụ CO ,. LTD.